Indlela yokuphila ye-Plus - I-Airbnb
Indlela yokuphila ye-Plus
I-i-townhouse ephelele ibungazwe ngu-Alicia
U-Alicia Ungumbungazi ovelele
Uzolithanda ikhaya lethu leholide e-Port Hinchinbrook Marina enhle, ngemizuzu nje emibili uma usuka e-Cardwell. I-Port Hinchinbrook izisebenzela ekudobeni okuhamba phambili, ukuhambahamba okuhle kwamakhono ahlukahlukene futhi iyindlela yokuya e-Hinchinbrook Island. Indlu izofanela noma ngubani ovela ezihambini zebhizinisi ezifuna i-oasis ekupheleni kosuku, kuya kuma-boaties amakhulu ane-jetty yangasese kanye nokuvakasha komndeni.
Okwenziwayo okuthandwayo kuhlanganisa:
- Ukubhukuda (indawo yokubhukuda kuphela njengoba kukhona ama-crocodiles)
- Ukudoba nokugwedla izinkalankala (amabhodwe enziwe)
- Ukuhambahamba epaki kazwelonke okuhlanganisa izimpophoma nezimbobo zokubhukuda.
4.84 · 71 okushiwo abanye
Le ndawo inezimpophoma eziningi ezinhle ezifana ne-Attie creek fall, i-Murray fall, izimbobo zokubhukuda ezifana namachibi amanzi aluhlaza okwesibhakabhaka, umgodi wokubhukuda wamamayela amahlanu. Amapaki Kazwelonke azungezile anezindlela zokuhamba eziphawuliwe.
Abanikazi bayatholakala ngeselula uma kukhona okukukhathazayo phakathi nokuhlala kwakho.
UAlicia Ungumbungazi ovelele